Säpo: 200 oo xag jir ayaa ku nool Sweden | Somaliska
Laanta Amaanka ee Sweden (Säpo) ayaa sheegtay in 200 oo qof oo xag jir ah ay ku nool Sweden. "Waa tiro yar oo laga hor tagi karo" ayuu yiri qabiirka u qaabilsan ka hortaga argagixisada Säpo Malena Remba. Warbixinta ay soo bandhigtay Säpo ayaa lagu sheegay in ay ogyihiin 200 oo qof oo xag jir ah oo kul nool sweden ayadoo 20 ka mid ah dadkaas ay Sweden gudaheeda xagjir ku noqdeen. 80% ayaa lagu sheegay warbixinta in ay yihiin dad ay macquul tahay in ay falal argagixiso ku kacaan halka 20% ay yihiin rag waaweyn oo xiriir debada ah leh. Warbixinta ayaa lagu sheegay sidoo kale in 20 qof ay ka baxday Sweden ayagoo u safray Somaliya si ay ugu biiraan Xarakada Al-shabaab. 200 ee la sheegay ayaa inta badan rag ah ayadoo la sheegay in ay ku jiraan dumar. isku celcelis ayaa da'dooda lagu sheegay 36sano. ayagoo dadkaan ka soo jeeda 36 wadan oo Sweden ay ka tahay nambarka sadex. Dadkaan ayaa la sheegay in ay inta badan ku nool yihiin magalooyinka waaweyn ee Sweden. Ninkii isku qarxiyay Stockholm ayaa la sheegay in uusan ka tirsaneyn 200 ee qof ee la sheegay in ay xagjirka yihiin, ayadoo la sheegay in uusan wax xiriir ah kala dhaxeyn dadkaan.
Laanta Amaanka ee Sweden (Säpo) ayaa sheegtay in 200 oo qof oo xag jir ah ay ku nool Sweden. “Waa tiro yar oo laga hor tagi karo” ayuu yiri qabiirka u qaabilsan ka hortaga argagixisada Säpo Malena Remba.
Warbixinta ay soo bandhigtay Säpo ayaa lagu sheegay in ay ogyihiin 200 oo qof oo xag jir ah oo kul nool sweden ayadoo 20 ka mid ah dadkaas ay Sweden gudaheeda xagjir ku noqdeen. 80% ayaa lagu sheegay warbixinta in ay yihiin dad ay macquul tahay in ay falal argagixiso ku kacaan halka 20% ay yihiin rag waaweyn oo xiriir debada ah leh.
Warbixinta ayaa lagu sheegay sidoo kale in 20 qof ay ka baxday Sweden ayagoo u safray Somaliya si ay ugu biiraan Xarakada Al-shabaab.
200 ee la sheegay ayaa inta badan rag ah ayadoo la sheegay in ay ku jiraan dumar. isku celcelis ayaa da’dooda lagu sheegay 36sano. ayagoo dadkaan ka soo jeeda 36 wadan oo Sweden ay ka tahay nambarka sadex. Dadkaan ayaa la sheegay in ay inta badan ku nool yihiin magalooyinka waaweyn ee Sweden.
Ninkii isku qarxiyay Stockholm ayaa la sheegay in uusan ka tirsaneyn 200 ee qof ee la sheegay in ay xagjirka yihiin, ayadoo la sheegay in uusan wax xiriir ah kala dhaxeyn dadkaan.
Warbixin ku saabsan Doorasada Midowga Yurub (EU-valet 2014)
Doorashada Sweden & Danaha Soomaalida: Xisbiyada Miljöpartiet & Vänsterpartiet
Daawo: Swedishka, ajaanibta iyo telefoonka!